काठमाडौं उपत्यकामै छन् ३०६ जना सक्रिय संक्रमित ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
काठमाडौं उपत्यकामै छन् ३०६ जना सक्रिय संक्रमित !
Published : 29 July, 2020 12:19 pm
काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ३ सय ६ पुगेको छ। मंगलबार ५३ जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय नाघेको हो। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौंका ४८, ललितपुरका ४ र भक्तपुरका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्।
उपत्यकामा देखिएका संक्रमितहरू कस्ता हुन् भन्ने बारे मन्त्रालयले विवरण खुलाएको छैन। यद्यपी संक्रमितहरू धेरै विदेशबाट आएका रहेको बताइएको छ। यस्तै बाहिरी जिल्लाहरूबाट उपत्यका प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिएको रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
केही संक्रमित भने उपत्यकाका स्थानीय र ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका पनि छन्। तर ती कति संख्यामा छन् भन्ने मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। लकडाउनलाई पहिलो चरणमा खुकुलो पार्ने निर्णय भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण नियन्त्रणको लागि एउटा मापदण्ड जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्डमा जिल्लामा २ सय बढी ‘एक्टिभ केस’ भएको अवस्थामा पूर्ण लकडाउन गर्न सकिने भनिएको छ।
अहिले काठमाडौंमा कोरोनाको ‘एक्टिभ केस’ २ सय नाघेको छ। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले अहिले उपत्यकामा पुनः लकडाउन गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारे।
‘मापदण्डमा गर्न सकिने भनिएको हो। त्यो पनि अवस्था हेरेर हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले उपत्यकामा संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। त्यसैले लकडाउन गर्ने कुनै योजना छैन।’
पछिल्लो समय उपत्यकामा पनि संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि यसले थप जोखिम निम्त्याएको विज्ञहरूले औंलाएका छन्। उनीहरुले संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान नदिन परीक्षणलाई व्यापक बनाउनुपर्ने सरकारले सुझाव दिँदै आएका छन्।
सरकारले स्टार अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेज गरी दुई वटा निजी अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने अनुमति दिएको छ। योसँगै उपत्यकामा तीन वटा सरकारी अस्पताललाई पनि सशुल्क परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ। जसमा वीर, टिचिङ र पाटन अस्पताल छन्।